24 Vavaky ny famonjena amin'ny fanahin'ny fanimbana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 24 Vavam-bavaka manafaka amin'ny fanahin'ny fanahy
24 Vavam-bavaka manafaka amin'ny fanahin'ny fanahy
Marka 1:23 Ary tao amin'ny synagoga no nisy olona azon'ny fanahy maloto; ary izy niantso, 1:24 nanao hoe: Avelao isika; inona no azonay aminao, ry Jesosy avy any Nazareta? Tonga handringana anay va ianao? Fantatro ianao fa iza ianao, Ilay Masin'Andriamanitra. 1:25 Ary Jesosy niteny mafy azy hoe: Mangina, ka mivoaha aminy. 1:26 Ary rehefa notsatohany ilay fanahy maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nivoaka avy tao aminy.
Androany isika dia handray vavaka amin'ny fanafahana amin'ny fanahin'ny toe-tsaina. Ny Fanahin'ny fampiviliana dia fanahy maloto, izany dia ny fanahin'i filan'ny izay miseho amin'ny fiainan'ny olona. Ny perversion dia ny fampiasana tsy takatry ny saina. Rehefa manomboka miasa ianao amin'ny fomba tsy araka ny tokony ho izy, na tsy ampiasainao amin'ny fomba nanendrena azy io, dia hosimbanao ianao. Androany isika dia hifantoka amin'ny fahavetavetana ara-nofo. Ny toe-tsaina manaratsy dia toe-tsaina mpikomy, manohitra ny zavatra rehetra andren'Andriamanitra, ny fanitsakitsahana ara-nofo dia lasa filaharana ny andro eto amin'izao tontolo izao ankehitriny, ny media rehetra, ny Internet ary ny media sosialy. Ny ota toy ny fangirifiriana, tsara indrindra, masochism, firaisan'ny samy lehilahy sy ny lesbanism dia haingana dia lasa fanaon'ny olona mahazatra sy mahazatra amin'ny tontolontsika ankehitriny. I Paoly ao amin'ny Bokin'ny Romana dia nahita mialoha ity taranaka ity ary nanoratra izao manaraka izao:
Romana 1: 21-28 Satria, rehefa nahalala an 'Andriamanitra izy ireo, dia tsy nanome voninahitra azy izy ireo ho Andriamanitra, na nankasitraka; fa nanjary very maina ny fisaintsainany, ary tonga maizina ny fony adala. 1:22 Raha nilaza ho hendry izy, dia tonga adala, 1:23 ary nanova ny voninahitr'Andriamani-tsy mety ho lasa sary tsy mitovy toetra amin'ny olona mety lo, sy ny vorona ary ny biby manan-tongotra efatra, ary ny zava-mandady. 1:24 Ary Andriamanitra nanolotra azy ho amin'ny fahalotoana amin'ny filan'ny fony, handoto ny tenany amin'ny tenany: 1:25 Izay nanova ny fahamarinan'Andriamanitra ho lainga, ary izy no nanompo sy nitsaoka ny voary mihoatra noho ny Mpahary. Ary isaorana mandrakizay. Amen. 1:26 Ary noho izany dia natolotr'Andriamanitra ho amin'ny filan-dratsy izy ireo; fa na ny vehivavy aza dia nanova ny fomba voajanahary ho an'ny zavatra manohitra ny natiora. 1:27 Ary toy izany koa ny lehilahy, dia nandao ny fanao voajanahary vehivavy ka nandoro ny tenany mania fitia lehilahy miaraka amin'ny lehilahy manao izay tsy hafahafa ary mandray ao am-pon'izy ireo hamaly ny fahadisoany. 1:28 Ary satria tsy te hitazona an'Andriamanitra amin'ny fahalalany izy ireo, dia natolotr'Andriamanitra ho amin'ny saina tsy mety, mba hanao ireo zavatra tsy mety;
Tsy fanirian'Andriamanitra ho an'ireo zanany ny famoretana ara-pananahana. Ho an'ny olona rehetra izay te-hafahana amin'izao fotoana izao, ity vavaka amin'ny fanafahana amin'ny fanahy ratsy ity dia hanafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy.
Ahoana no Hialako Amin'ny Fanahin'ny Faharatsiana?
1. Famonjena: Ny famonjena dia dingana voalohany navotsotra amin'ny fanahin'ny faizina. Ny Romana 10:10 dia milaza amintsika fa ny famonjena dia avy amin'ny fo aloha. rehefa manome ny fonao an'i Jesôsy ianao dia midika koa fa manilika ny fahotana amin'ny fonao koa ianao. Ny famonjena dia mahatonga ny fahasoavana handresena ny ota mety ho anao ao amin'i Kristy Jesosy Ny fotoana hahaterahanao indray, dia lasa zavaboary vaovao ianao, ny taloha anao mivadika sy ny Fanahy masina mandray an-tànana vaovao ianao, ity vaovao ity dia mihabetsaka amin'ny fahasoavana ary mandeha amin'ny fahamarinana.
2. Ny Teny: Arakaraka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika, ny madio no azontsika amin'ny fanahintsika. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao, omena ny fandinihana ny tenin'Andriamnitra, dia tsy afaka ny hiharan'ny fanerak'i satana ianao. Avelao ny tenin'Andriamanitra mitoera ao aminao, satria ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka manafaka anao amin'ny fandringanana. Salamo 107: 20.
3. Vavaka: Ny vavaka dia trano masin'Andriamanitra, izay ahazoantsika hery avy ao anatintsika. Rehefa mivavaka isika dia mahazo hery hilazana hoe tsy manota ary ny karazana tsy fahamarinana rehetra. Raha te-handresy ny fakam-panahy amin'ny filàna ara-nofo sy ny filan'ny nofo ianao dia tsy maintsy omena vavaka. Nilaza Jesosy fa mivavaha mba tsy ho resin'ny fakam-panahy. rehefa mandray an'ireto vavaka famonjena ireto amin'ny toe-tsaina feno faharatsiana aho dia hitako fa ny fanafahana anao dia vita ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Vavaky ny famonjena
1. Misaora an'Andriamanitra noho ny heriny hanafaka amin'ny fanandevozana rehetra.
2. Mihataka amin'ny fanahy ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
3. Manafaka ny tenako amin'ny fahalotoana ara-panahy rehetra vokatry ny fahotako taloha tamin'ny fijangajangana sy fahalotoam-pitondrantena tamin'ny anaran'i Jesosy.
4. Manafaka ny tenako amin'ny fahalotoan'ny razana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
5. Manafaka ny tenako amin'ny fandotoana nofy rehetra aho amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Mandidy ny fambolena ratsy rehetra mamoafady amin'ny fiainako aho mba hivoaka miaraka amin'ny fakany rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ny fanahy ratsy rehetra mamoa-tena manohitra ny fiainako, maharary sy hiala amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ny demonia rehetra amin'ny firaisana ara-nofo nomena ny fiainako dia hofatorana, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ry Tompo Ray, avelao ny herin'ny fametavetana manenjika ny fiainako handray ny afon'Andriamanitra ary roahona, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ny demonia rehetra mandova eo amin'ny fiainako, mandray ny zana-tsipiky ny afo ary mijanona ho voafatotra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Mandidy ny herin'ny fametavetana rehetra hamely azy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
12. Raiko Tompo, avelao ny herin'ny demonia tsirairay namboarina teo amin'ny fiainako tamin'ny alàlan'ny fanahin'ny fijangajangana ara-nofo, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Aoka ny herin'ny fametavetana rehetra izay nandany ny fiainako ho torotoro, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Avelao ny fanahiko ho afaka amin'ny herin'ny fametavetana amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Aoka ny Tompo Andriamanitr'i Elia, hitsangana amin'ny tanana mahery amin'ny vady / mpivady fanahy ary amin'ny herin'ny fametavetana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Tapahako ny tanan'ny hery ratsy amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Izaho dia manafoana ny vokatr'izany rehetra izany, amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Ny olon-tsy fantatra ratsy rehetra sy ny satana rehetra ao anaty fiainako dia andidiako ianao ho mararin'ny làlana sy hiala amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. afo ny Fanahy Masina, diovy tanteraka ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Izaho dia mitaky ny hanafahana ahy tanteraka amin'ny fanahin'ny fijangajangana sy ny fahalotoam-pitondrantena amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Aoka ny masoko halefa ny filàna, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Tahaka ny anio dia aoka ny masoko no hifehy ny Fanahy Masina amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Fanahy Masina ô, mianjerà amin'ny masoko, ary dory ho lavenona ny hery ratsy rehetra sy ny hery satanika mifehy ny masoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Mihetsika avy amin'ny fanandevozana mankany amin'ny fahafahana aho amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraZava-bavaka 30 ho an'ny fanadiovana ara-panahy
Next lahatsoratra30 Vavam-bavaka manafaka amin'ny fanahin'ny tsy fahalavorariana
lilo 26 septambra 2020 amin'ny 8:24 hariva
😂 😂 😂 dia für ein Haufen Schwachsinn
30 Ny vavaka manafaka dia manondro ny fitomboana tsy maniry ao an-kibo
Vavaka amin'ny alina mahery manohitra ny herin'ny maizina